तीज गीतको संस्कृतिमा नै अतिक्रमणको प्रयास भइरहेको छ : हरिदेवी कोइराला - Parichay Network
तीज गीतको संस्कृतिमा नै अतिक्रमणको प्रयास भइरहेको छ : हरिदेवी कोइराला
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ३१ श्रावण २०७७, शनिबार १७:२३ मा प्रकाशित
राजु गिरी, पाेखरा ।
नेपाली लोक संगीतकी तारा हुन् हरिदेवी कोइराला । नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानको प्राज्ञसमेत रहेकी कोइराला नेपालकी लोकप्रिय लोक दोहोरी गायिका हुन् । उनले अधिकांश गीत आफ्नै लय र शब्दमा गाएकी छन् । ‘पाइनँ खबर’ उनको पहिलो र सर्वाधिक रुचाइएको लोकगीत हो ।
तीज गितमा पनि कोइरालाको योगदान निकै माथिल्लो स्थानमा राखिन्छ । २ सयभन्दा बढी तीज गित रेकर्ड गराएकी कोईरालाले यस पालिको तीजमा ‘कस्ता दिन गयो बरिलै’ भन्ने बोलको गित निकालेकी छन् । उनको पहिलो तीज गित २०४५ सालमा ‘तीजको कोशेली भाग २’ हो । अहिले तीज गितको सन्दर्भ, परिवेश र यसमा रहेको मौलिकता विस्तारै टाढा गएकोमा निकै चिन्तित छिन् । उनी भन्छिन् –‘तीज पर्वका अवसरमा गाउने गितलाई तीज गित त भन्छौं र हामीले सुनेका पनि छौं । तीज गितका नाममा धेरै गितहरु रेकर्ड भैरहेका छन् । तर तीज गितको सन्दर्भ, परिवेश र यसमा रहेको मौलिकता धेरै बाहिर गईरहेको छ । तीज गित भन्ने वित्तीकै यसको आफ्नो संस्कार संस्कृति हुन्छ । विशुद्ध पारिवारिक, सामाजिक, सिष्टता र सभ्यता दर्शाउने गर्छ ।’
अहिले मौलिकता भन्दा बाहिर गएर तीज गित भन्दै गाएको देख्दा अचम्म लागेको उनी बताउँछिन् । सबै तीज गित त होईन तर केही यस्ता तिज गितहरु बजारमा आएका छन् जुन उत्श्रृंखल, अपाच्य शैली खालको गितहरु आएकोमा दुःख व्यक्त गर्छिन् उनी । कोईराला भन्छिन् –‘यसरी तिज गितको मर्मलाई नै प्रहार हुने गरि संस्कृतिमाथी प्रहार भईरहेको छ । संस्कृतिमा नै अतिक्रमणको प्रयास भइरहेको छ ।’
ठेट तीज गितमा चेलीहरुको मर्म, वेदना, समाजका घटना, समाज परिवर्तनका कुरा हुने र समग्रमा समाजमा भएका विकृति विसंगतीलाई संगीतमार्फत प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । पहिले पहिलेका तीज गित सुनेर कहाँ कस्ता घटना भए थाहा पाईने गरेको उनको अनुभव रहेको बताउँछिन् । तर अहिले यस्ता मर्म रहेको तीज गित लोप हुँदै गएको उनको अनुभव छ ।
हामीपछिका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने संस्कृति कस्तो हुनुपर्ने हो ? प्रश्न गर्दै यसबारेमा सोच्नै पर्ने बेला आएको उनी बताउँछिन् । तीजको मर्म मान्यता बुझ्नेले नै बिगारेको देख्दा मनमा ठेस पुगेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् –‘अहिलेका केही तिज गितका नाममा बजारमा निस्किएका गितहरु परिवारसँग बसेर हेर्न पनि नसकिने खालको छ । तीजलाई बुझ्न प¥यो, तीजले बोकेको संदेश के हो ? यसको मुल्य मान्यता यो सबै बुझ्न जरुरी छ ।’
‘दिन प्रतिदिन तीजको परिवेश भन्दा बाहीर गएर तीज गित आईरहेको छ । यसलाई तिजको सन्दर्भमा निकालिएको गित भनिदिए केही राम्रो हुने थियो । तीज गित भन्दैमा त्यस्ता प्रकारका गित तीज गित हुनै सक्दैनन् । तीज भनेको एकल दोहोरी हो । महिला एक जनाले एकल दोहोरीको रुपमा आफैले भन्ने हो । बिचमा पुरुषले गाएपनि अत्यन्त शिष्टता, पारिवारिकता र मौलिकताका साथ आएको थियो तर विस्तारै समय परिवर्तन सँगै अहिले तीजको भाका नै हरायो । रत्यौली भाका आए, पुरुषले गाउने भाका आए, दोहोरीका भाका आए हुदाँहुदाँ अहिले गाईजात्राको भाकामा आएको छ । तीज भनेको गाईजात्रा होईन ।’ –उनी भन्छिन् ।
अहिलेत तीज गितमा गितार बजाएर गाउन थालिसक्यो । विकृति यति बढ्यो कि तीज गितमा गितार बजाएर गाउन थालिएको उनी बताउँछिन् । यसरी विकृति आउँदै जाँदा तीज गितको संस्कृति माथीको जरा नै खल्बलिरहेको उनको भनाई छ । प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन् –‘यसरी जाँदा हाम्रो पुस्ताले के सिक्छ ? तिज भन्ने एकादेशको कथा हुनेछ ।’
उनका अनुसार तीज गित भनेको धेरै गाए वर्षको १ महिना हो नत्र गाउँतिर अहिलेपनि धेरैमा १५ दिन जस्तो गाउँने गरिन्छ । तीजका नाममा सस्तो व्यवसाय गर्ने सोँच अनि प्रतिष्पर्धाको सोचाईले पनि विकृतिको रुपमा आईरहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘पहिलाकै जस्तो हुनै पर्छ भन्ने होईन, तर मौलिकताको सुगन्धलाई परिवर्तन गर्नु हुदैन । तीजको भाका एउटै हुन्छ । यसको मर्म बुझिदिनुहोस् । सके सपारौं, नसके नविगारौं ।’
कोही नजानेर गित गाईदिँदा मौलिकतालाई विग्रिएको र कोही जानी जानी यसलाई तोडमोड गरेर विगारेकोमा निकै चिन्तीत छिन् उनी । यस क्षेत्रमा नयाँ आउनेहरु बुझेरै आउन अनुरोध उनी गर्छिन् । तीज गितलाई राज्यबाटै बेलैमा संरक्षण गर्न नसकिए लोप हुने उनको भनाई छ ।
संगीत व्यवसाय गर्ने ठाउँ नभएको उनको बुझाई छ । पैसालाई हेरेर गित संगीतमा प्रवेश नगरेको उनी बताउँछिन् । उनी भनिछन् –‘संगीतलाई कहिल्यै व्यवसाय तरिकाले हेरिन र बनाईन पनि । धेरै ठाउँ तथा कार्यक्रममा गएर गाए तर पैसा लिने र व्यवसायीक तरिकाले कहिल्यै हेरिन । तीजको बेला त यस्तो व्यस्त भईन्थ्यो कि एकै दिनमा १० वटा ठाउँको कार्यक्रममा समेत भ्याउनु पथ्र्यो । यो नै मेरो सन्तुष्टि हो ।’
हरिदेवी कोइराला चौध वर्षको हुँदा पहिलो पटक उनको कविता छापिएको थियो । त्यही बेलादेखि गाउँघरका साँस्कृतिक कार्यक्रममा उनले गाउन थालिन् । उनले गाएका पाइनँ खबर, आमा तिम्रो दूधको त्यो भारा, ऐना हेरेर, फूलको बासना, झिल्झिल सितारा, यसैत मन मेरो धमिलो, देखिँदैन हृदय जलेको, त्यसै गरी तीजका गीतहरुमा भृकृटी र सीता जस्ती नारीको यो देशमा, पधेंरामाथि अम्बा पाक्यो डाली नुघाइ खाउँला है आज दिनैमा, हाम्रा बाबा लिन आउँछन्, ढल्किढल्की जाउँला है आज दिनैमालगाएतका तिजका गीतहरु रहेका छन् । समाजका भएका घटना, नारी वेदना, समाज सचेतनाजस्ता कुरालाई माथी उठाएको उनको गितमा पाउन सकिन्छ ।